Ny maso mitrona Emoxipine
Ny vatan'ny Emoxipin amin'ny fomba fitsaboana hafanam-po dia tena manan-danja - izy ireo dia natao hamerenana ny tavy maso. Ireo dia dity antioxidant synthetic izay manakana ny peroxidation ny lipida amin'ny selan'ny sela, ary dia aseho amin'ny fomba maro samihafa.
Asidra sy fihetsika ho an'ny mason'ny Emoxipine
Emoxipine dia fanafody maoderina izay mampitombo ny fanoherana amin'ny tsiranoka amin'ny tsy fahampian'ny oksizenina, ary mampitombo ihany koa ny fiovaovan'ny vascular ary manakana ny fividianana vagao.
Io antihypoxic sy anti-protective agent io dia mampihena ny fiverimberenan'ny vavahadin'ny maso, ary koa ny fiovaovan'ny fluid intraocular.
Ny totozy dia 1% ny vahaolana, izay misy 1 mg misy 1 mg ny vidy mavitrika - methyl ethyl pyridinol. Ny fonosana dia sterile 5 ml.
Ny voka-dratsiny dia manampy amin'ny:
fanamafisana ny rindrina vovoka;
fanapahan-kevitry ny fitsaboana madinika;
manampy amin'ny ady amin'ny hypoxia;
Miaro ny lamba sy ny hafanana amin'ny hazavana mamirapiratra;
Toromarika momba ny fampiasana ny rotsak'i Emoxipine
Noho ny toetra amam-pananana azy, io solontenany io dia aseho amin'ny fomba maro samihafa amin'ny maso.
Fanondroana ny fampiasana Emoxipine
Tamin'ny voalohany, ity fitaovana ity dia natolotra ho an'ny fitsaboana ny aretin-maso, tsy manimba ny atin'ny maso vokatry ny diabeta mellitus , amin'ny tsindrona amin'ny tsinay noho ny aretin'ny ati-maso, ny fitsaboana ny trombôs veine ao amin'ny retina, ary amin'ny fitandremana ny myopia (myopia).
Amin'ny alàlan'ny fepetra ara-tontolo iainana mahery vaika (ny fandrahonana ny laser na ny solika), ity fanafody ity dia ampiasaina mba hanamaivanana ny soritr'aretina.
Ny dipoavatra Emoxipine dia ampiasaina mandritra ny famerenana indray aorian'ny fandidiana laser amin'ny retina.
Ankehitriny, ny dokotera dia nahitana fampiharana bebe kokoa ho an'ireo ratra ireo, ary omena ireo marary tsy ampy ny oksizenina amin'ny tavy maso - amin'ny aretim-panafody, aretina hoditra, fahasimban'ny rà, glaucome , sns.
Ireo dingana ireo dia ampiasaina amin'ny fomba telo:
ho an'ny eyeball - retrobulbarno;
ao amin'ny toerana akaikin'ny angona eyeball - parabulbar;
eo ambanin'ny hoditry ny maso - mifanaraka amin'ny toerany.
Ny medicament Retrobulbarno dia ampiasaina 0.5 litatra isan'andro indray isan'andro mandritra ny 15 andro.
Ny fomba roa ambiny - parabudarno sy subconjunctivally - 0.5 litatra indray mandeha isan'andro na andro hafa mandritra ny 10 hatramin'ny 30 andro.
Ny fitsaboana dia azo atao isan-taona isan-taona eo ambany fanaraha-mason'ny dokotera iray.
Alohan'ny fampiasana laser, i Emoxipin dia apetraka amin'ny eyeball 24 ora mialohan'ny fandehan-draharaha, ary avy eo mandritra ny ora iray. Taorian'ny fitandremana, ilaina ny mampiasa raboka retrobulbar 0,5 ml mandritra ny 10 andro.
Ao amin'ny mararin'ny aretin'ny fifindran'ny aretim-panafody, i Emoxipin dia entina amin'ny fitsaboana mandritry ny 5 andro amin'ny doka 10 mg isaky ny kilao isan'andro.
Ny fitsaboana dia roa herinandro. Ilaina ny fisorohana ny necrosis sy hampihena ny fizotran'ny fanarenana.
Amin'ny fampiharana ny fampiharana, ny tolo-kevitra dia tsy hanambatra ny fanafody amin'ny vahaolana hafa amin'ny zava-mahadomelina.
Torolalana ho an'ny fitsaboana Emoxipine - fanoherana
Ny fanafody dia tsy azo ampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka, ary koa ny fanehoan-kevitra mahakasika ny voka-dratsiny. Alohan'ny fampiasana dia tokony hifanaraka amin'ny dokotera ny vanim-potoana.
Ny vokatry ny zava-mahadomelina
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fako dia alefa tsara, fa amin'ny tsy fandeferana, ny fofona, ny fandoroana, moka, fanaintainana ary fahamendrehan'ny maso. Mba hisorohana ny fihetsika tsy mahazatra, dia asaina ampiasaina ny kortikosteroids.
Misy ny analoges maro momba ny fitsabahan'ny maso Emoxipine:
Furacilin ho an'ny gargling
Ny fitsaboana ny hypothyroidism - Endonorm
Toxocarosis - fitsaboana
Chondrosis - fitsaboana
Manitra manitra ho an'ny hoditra
Aretina mihanaka atrophika
Staphylococcale infection - soritr'aretina
Fanetsana fanasan-damba amin'ny saka - fitsaboana
Pumpkin ao anaty saosy mofomamy - hevitra tsy mahazatra amin'ny fanaovana sakafo matsiro
Ahoana ny fomba hidirana tsara ny valindrihana?
Ny supermodel "lafo" indrindra dia nalaza tamin'ny resaka Vogue vaovao
Ahoana no itomboan'ny zaza ao am-bohoka?
Ryan Gosling sy Eva Mendes
Manamboatra voaloboka amin'ny aretina amin'ny fararano
Kitay miaraka amin'ny roaharbarb - recipe
Armbant vita amin'ny "rubber band" Shnurki "
Kipferon labozia ho an'ny ankizy
Mangataha amin'ny lakandrano mihetsiketsika
Toeram-pandriana tsy mety lo
Serous ovara serous
Famantarana ny cystitis amin'ny vehivavy
Drake niseho am-pahibemaso niaraka tamin'ny amboara vaovao
Ny fivoaran'ny teboka fahadimy Kim Kardashian: fahamarinana mahavariana momba ny fihodinan'ny saribakoly indrindra eto an-tany
Fanadiovana rivotra ho an'ny trano fonenana
Jeans ho an'ny vehivavy
Ny rahavavy Chloe Kardashian dia niasa tamim-pahatokisana aloha taorian'ny vaovao momba ny famadihana an'i Tristan Thompson
Sauna misy teratany